#ChhoriMaiyaKhai शृंखला-३ : के निकीले छोरीमैयाँ हराएको दिनको टाइमलाइन ‘ढाँटेकी’ हुन् ? (भिडियो रिपोर्ट) Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
शृंखलाको दोस्रो भागमा महर्जन परिवार र निकी भनिने सुरक्षा सिंहले छोरीमैयाँ हराएको दिनको टाइमलाइन बताउने क्रममा कुरा बाझिएको अनुसन्धानमा देखिएको र ततिम्बा बयानमा निकीलाई किन ढाँट्नुभएको हो? भनेर सोधिएकोसम्म प्रसंग थियो।
०६८ फागुन १६ मा काठमाडौँको जैसिदेवलबाट निस्किएकी ५१ बर्सिया छोरीमैयाँ महर्जन कता छिन् अत्तोपत्तो छैन। अपहरण तथा शरीर बन्धकमा चलेको मुद्दा किनारा लागिसक्यो। तर न उनको सास फेला परेको छ न लास। आखिर छोरीमैयाँ कहाँ छिन् ?
यही घटनाको चिरफार गर्न उकेरा डटकमले सुरु गरेको विशेष शृङ्खला छोरीमैयाँ खै को तेस्रो भाग।
सबै श्रृंखला : https://www.ukeraa.com/#ChhoriMaiyaKhai
रिपोर्टिङ : उमेश श्रेष्ठ र प्रजु पन्त
मल्टिमिडिया : कृष्पा श्रेष्ठ
अडियो : सन्तोष पौडेल